Akụkọ - Mgbake ahịa nchara China na-aga n'ihu
Mgbanwe ahịa nchara nke China na-aga n'ihu, n'etiti mgba ụwa
Ọrịa coronavirus kpatara mbibi na ahịa nchara na akụnụba gburugburu ụwa, n'ime ọnwa isii mbụ nke 2020. Ọnọdụ akụ na ụba China bụ onye mbụ nwere nsogbu nke mkpọchi ndị metụtara Covid-19. Ihe mmepụta ihe nke mba ahụ dara, na February nke afọ a. Otú ọ dị, e dekọtara ngwa ngwa kemgbe April.
Mmechi nke ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe, na China, mere ka a na-enwe nsogbu nsogbu ọkọnọ na mpaghara niile, gafere ọtụtụ ngalaba na-eri nchara. Ọ dịghị ihe ọ bụla karịa na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, nke na-agbasi mbọ ike ịnagide usoro nyocha ọhụụ na ịkwaga na-acha akwụkwọ ndụ, nke na-emewanye ike karị.
Mmepụta na ndị na-eme ụgbọ ụwa na-anọkarị n'okpuru ọkwa ọrịa na-efe efe, agbanyeghị nbelata mmachi nke gọọmentị machibidoro n'ọtụtụ mba. Ochicho nke akuku a di nkpa nye otutu ndi na emeputa nchara.
Ntughari na ahia nchara, na China, na-aga n'ihu na-achikota ngwa ngwa, n'agbanyeghị mmalite nke oge mmiri ozuzo. Usoro mgbake ahụ nwere ike inye ụlọ ọrụ ndị China mmalite mgbe ndị ahịa ụwa na-alaghachi n'ahịa ahụ, mgbe ọnwa ole na ole nọrọ n'ụlọ. Agbanyeghị, ịrị elu ụlọ na-eto eto, na China, nwere ike ịmịpụta ọtụtụ mmụbawanye abawanye.
Igwe igwe na-agbaji US $ 100 / t
Nrịgo nke mmepụta ihe nchara ndị China, n'oge na-adịbeghị anya, nyere aka na ọnụ ahịa igwe igwe na-ebugharị karịa US $ 100 kwa tọn. Nke a na-enwe nrụgide na-adịghị mma na oke oke uru na mpụga China, ebe ọchịchọ na-ada ụda na ọnụahịa nchara adịghị ike. Ka o sina dị, ịrị elu mmefu ntinye nwere ike inye ndị na-emepụta ihe ike ịkwalite site na nrịgo ọnụ igwe dị ezigbo mkpa, n'ọnwa ndị na-abịanụ.
Iweghachite na ahịa ndị China nwere ike ikpughe ụzọ nke mpụga nke coronavirus na-ada ada na mpaghara mpaghara nchara. Ndi ozo nke uwa n'azu mgbago. Ọ bụ ezie na nlọghachị na mba ndị ọzọ yiri ka ọ dị nwayọ nwayọ, enwere akara ngosi dị mma iji wepụta na China.
Ọnụ ego nchara nchara nwere ike bụrụ nke na-agbanwe agbanwe, na ọkara nke abụọ nke 2020, ebe a na-atụ anya ka ụzọ mgbake ghara ịdị. Ọnọdụ dị n’ahịa zuru ụwa ọnụ nwere ike ịka njọ tupu ọ ga-aka mma. O were ọtụtụ afọ maka mpaghara nchara iji nwetaghachi ọtụtụ ala furu efu, na-esote nsogbu ego 2008/9.
Tct okirikiri hụrụ UM UBARA, Hot Work Ngwá Ọrụ Steel gbapụtara Ewepụghị Ogwe, Hss M35 okirikiri hụrụ pupụtara, Tct okirikiri Hụrụ Agụba, Tct okirikiri Hụrụ Agụba N'ihi Metal, Hss M2 okirikiri hụrụ pupụtara,